Fri, Jul 10, 2020 at 6:41pm
काठमाडौँ, ११ भदौ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य पशुपति क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण हुने भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा–ताम्रागंगा सडक बन्द गराएपछि सरकारले विकल्पमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो। १३ वर्षअघिबाट सञ्चालनमा आएको सडक विकल्पबिना नै बन्द गराएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले कोषसँग असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। तर कोषले भने विश्व सम्पदा सूचीमा कायमै राख्नका लागि..
नुवाकोट, ८ भदौ राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ऐतिहासिक सम्पदालाई बिझाउने गरी निजी आवास पुनःनिर्माण हुन दिन नहुने बताउनुभएको छ । साततले दरबार र वरपरको सम्पदा तथा निजी आवासको पुनःनिर्माणको अवलोकनपछि आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले सम्पदा बस्ती निर्माण गर्ने भनिए पनि आधारभूत मान्यताको पालना नभएको बताउनुभयो । “सम्पदा बस्ती भनिएको छ तर, छेवैमा रहेको ऐतिहासिक सम्पदालाई बिझाउने गरी निजी..
बाँके, ८ भदौ । नेपाली नारीको महान् चाड तीजको ऐतिहासिक मौलिकपन दिन प्रतिदिन खस्किँदै जान थालेको छ । नेपाली महिलाले तीज पर्वलाई पवित्र पर्वका रुपमा मनाउँदै आए पनि पछिल्लो समय तीज पर्व मनाउने शैलीमा तडकभडक र विकृति बढ्दै गएको स्वयं महिलाले नै गुनासो गरेका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–५ की मनकुमारी शाहीले विगतका दिनमा आफूले तीज पर्वलाई नेपाली संस्कृति र आफ्नै मौलिकपनमा मनाउने..
विराटनगर, ७ भदौ ऐतिहासिक राधाकृष्ण रथयात्रा आज विशेष पूजापाठ गरेर विराटनगर–१ पानीट्याङ्कीबाट प्रारम्भ भएको छ । सो अवसरमा प्रदेश नं १ का प्रमुख प्रा डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सङ्घीय सांसद शिवकुमार मण्डल, प्रदेश सदस्य केदार कार्की र बिन्दीया कार्कीले विशेष पूजाअर्चनामा सहभागी हुनुभएको थियो..
ललितपुर, ७ भदौ ललितपुरको मङ्गलबजार परिसरमा आज साँझ भीमसेन जात्रा मनाइँदै छ । व्यापार व्यवसायमा लागेका हरेक मानिसले भीमसेनलाई आरध्यदेवका रुपमा पूज्ने गरेका छन् । भीमसेनको पूजा र आरधनाले वैभव वृद्धि हुँदै जाने जनविश्वास छ । प्रत्येक वर्ष भाद्र कष्ण नवमीका दिन भीमसेन जात्रा मनाइने चलन छ । आज साँझ करीब साँढे ४ देखि ५ बजेसम्म भीमसेनको सानो मूर्तिलाई पीतलको खटमा ल्याएर..
पाल्पा, ७ भदाै । पछिल्लाे समय विस्तारै हराउँदै गएकाे स्थानीय लोकबाजा र संस्कृतिलाई जोगाउन नौमती बाजा प्रतियोगिताको आयोजना भएकाे छ । स्थानीय लोकबाजा र संस्कृतिलाई जोगाउन तानसेनमा नौमती बाजा प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हाे । प्रतियोगितामा तानसेन नगरपालिका–५ सेतीपोखरीस्थित सेतीपोखरी धर्मपानी नौमती बाजा समूह प्रथम भएको छ । प्रथम हुने समूहले रु ५० हजारको पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । तानसेन नगरपालिका–७ काजीपौवास्थित लालुपाते नौमती बाजा समूहले..
ललितपुर, ६ भदौ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाटनस्थित कृष्ण मन्दिरको दर्शन गर्नुभएको छ । प्रत्येक वर्ष श्रीकृष्णाष्टमीका दिन यस मन्दिरको राष्ट्रप्रमुखले दर्शन गर्ने परम्परानुसार आज दिउँसो उहाँ पाटन आउनुभएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई मन्दिरका मूल पूजारी प्रतापधर शर्माले प्रसाद तथा टीका ग्रहण गराउनुभएको थियो । उहाँलाई मन्दिरका नौ जना पूजारीले हातमा पाती, फलफूल, सगुन, माला र खादा अर्पण गरेका थिए । उहाँले झण्डै..
काठमाडौँ, ६ भदौ । भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन आज बिहानैदेखि देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको भीड लागेको छ । ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ का अवसरमा आज देशभरि भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी श्रद्धा–भक्तिपूर्वक मनाउन लागिएको हो । ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान् श्रीकृष्णको जन्म द्वापरयुगमा भाद्रकृष्ण अष्टमी अर्थात् आजैको मध्यरातमा भएकाले यस दिनलाई ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ र रातलाई ‘मोहरात्रि’ भन्ने गरिएको छ । यस अवसरमा पाटनको मङ्गलबजारस्थित प्रसिद्ध कृष्णमन्दिरमा..
धनगढी, ५ भदौ सुदूरपश्चिम प्रदेशका गौरा घर र मन्दिरमा आज धार्मिक अनुष्ठानका साथ गौरा भित्र्याइएको छ । व्रत बसेका महिलाको समूहले धान, साउँ, कुस, अपामार्गलगायत बोटबिरुवा प्रयोग गरी गौरादेवीको प्रतिमा तयार पारेर धार्मिक अनुष्ठानका साथ गौरा भित्र्याएका हुन् । घर नजिकको खेतमा गई सामूहिक रुपमा ‘फाग’ गीत गाउँदै यो प्रतिमा तयार पार्ने गरिन्छ । गौरा भित्र्याउने आजको दिनलाई स्थानीय भाषामा ‘ठूली गौरा’..
चरिकोट, ५ भदौ दोलखाबजारमा मात्र पाँच दिनसम्म मनाइने भैरव कुमारी जात्रा सकिएको छ । दोलखा जिल्लाको नेवार समुदायको बसोबास रहेको दोलखाबजारमा मात्र मनाइने भैरव कुमारी जात्रा गए राति दोलखा बजारका मन्दिर र टोलहरुमा भैरव कुमारीको परिक्रमा गराई सम्पन्न भएको हो । गाईजात्राको भोलिपल्टदेखि लगातार पाँच दिनसम्म मनाइने यो जात्रामा कुमारीको विभिन्न रूप बनाई रातिको समयमा बाजागाजासहित दोलखा बजारको टोलको परिक्रमा गराइन्छ । दोलखा..
गौरा पर्वमा देउडाको ‘क्रेज’, पाकासँगै युवापुस्ता पनि रमाउँदै
भीमदत्तनगर, ४ भदौ आज बिहान कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले विश्वविद्यालय परिसरमै गौरा पर्वका अवसरमा देउडा खेल्दै रमाए । विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीले संयुक्त रुपमा गोलबद्ध भएर देउडामार्फत सुदूरपश्चिमका भाका विश्वविद्यालयमा प्रस्तुत गर्दा केही समय विश्वविद्यालय गौरामय बन्यो । विश्वविद्यालयम मात्रै नभइ सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै ठाउँमा मङ्गलबारदेखि शुरु भएको गौरापर्वसँगै देउडाले बजार तताउन थालेको छ । पाका पुस्तासँगै युवा पुस्ता पनि देउडामा..
काठमाडौँ, ३ भदौ यस वर्ष इन्द्रजात्राको अवलोकन गर्न महानगरको भगिनी सम्बन्ध भएका नगरका झण्डै ४८ जना पाहुना काठमाडौँ आउने भएका छन् । आगामी २७ गते पर्ने सो पर्वका अवसरमा छ देशका १३ नगरबाट पाँच प्रमुखसहित ४८ पाहुना आउने निश्चित भएको कामपाले जनाएको छ । महानगरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयले महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई भेटेर सचिवालयको तयारीका विषयमा जानकारी दिएको छ । सचिवालयले गत..
भगवान् श्री राधाकृष्ण रथयात्रामा हेलिकप्टरबाट पुष्पार्पण हुने
विराटनगर, ३ भदौ भगवान् श्री राधाकृष्ण रथयात्राको ५२ औँ महोत्सवका लागि तीव्र गतिमा तयारी भइरहेको छ । राधाकृष्ण रथयात्रा समारोह समिति–२०७६ द्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा समितिका अध्यक्ष बाबुराजा ओझाले भदौ ७ गते अपराह्न निस्कने राधाकृष्ण रथयात्रामा हेलिकप्टरबाट पुष्प अर्पण हुने बताउनुभयो । अपराह्न युगल जोडी राधाकृष्ण विराजमान रथ मन्दिरबाट प्रारम्भ भई शहरका विभिन्न स्थान परिक्रमा गरी पुनः मन्दिरमा पुगी धार्मिक..
के हो 'गुँला पर्व' ? कसरी मनाईन्छ ?
काठमाडौँ, ३ भदौ ‘जयनमो श्रीबुद्ध भगवान् लुम्बिनी बनस बिज्यात । ब्रह्मानं बँपुयेका सरस्वती बसा लायका अलंङ्कापुरया जुजु कुवेर नं धनद्रव्य लायका विज्यात ।’ देशको राष्ट्रिय पर्वका रुपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा एक महीनासम्म मनाइने गुँलाधर्ममा स्वयम्भू महाचैत्यदेखि विभिन्न स–साना चैत्यहरुमा बजाइने भगवान् बुद्धको गाथा समेटिएको प्राचीन गाथाको श्लोक हो । यो श्लोक गुँलाथ्व प्रतिपदा (साउन १७) देखि यँलाथ्व प्रतिपदा (भदौ १४) सम्म..
घर–घरमा ‘बिरुडा’ राखेर सुदूरपश्चिममा सुरु भयो गौरा पर्व
धनगढी, ३ भदाै । सुदूरपश्चिम प्रदेको मौलिक धार्मिक-सांस्कृतिक पर्व गाैरा मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । सुदूरपश्चिमेलीहरूले आज विरुडा पञ्चमीका दिन घर-घरमा बिरूडा राखेर गाैरा पर्व सुरु गरेका हुन् । घरको कुनै ठाउँमा गाईको गोबरले पोतेर शुद्ध बनाई तामा अथवा पितलका भाँडाको बाहिरपट्टि पाँच ठाउँमा गाईको गोबर र दुबो लगाइ टीका र अक्षताले सिङ्गारेर पञ्चअन्न गहुँ, मास, गहत, गोरस र कलौ धोएर राख्ने चलर रहेको छ ।..
डोटी, २ भदौ । सुदूरपश्चिमको प्रमुख धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व गौराको चहलपहल शुरु भएको छ । गाउँमा गौरा घर लिपपोत शुरु भएको छ । वर्षाले भत्किएका बाटाघाटा मर्मत र सरसफाइमा गाउँलेहरू जुटिसकेका छन् । गौरा विसर्जन गर्ने मठमन्दिरको सरसफाइ पनि शुरु भइसकेको छ । डोटीका हरेक गाउँ र टोलमा गौरा महोत्सवको उल्लास देखिन थालेको छ । पुरुषहरूले मठमन्दिर सरसफाइ गरी गौरा भित्र्याउन देवताका चैत, धुमारी र..
भक्तपुर, २ भदौ । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको नगदेशमा शनिबार रातिदेखि महाकाली जागेकी छिन् । स्थानीय युवाको सक्रियतामा पुनः जीवन पाएको महाकाली नाच नगदेशमा प्रदर्शन शुरु भएको हो । रातिदेखि शुरु भएको यो नाच हरेक रात करीब चार घण्टा नगदेशको च्वें त्वाः गाः, कुमालाछी, छ्वास त्वाः, नृत्यनाथ, लाछी टोलमा प्रदर्शन गरिने नाचका गुरु भक्तबहादुर घजूले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी बाहः ननीस्थित उःननी र थःननी,..
ओल्के पर्व मनाउँदै सुदूरपश्चिम
धनगढी, १ भदाै । आज सिंह सक्रान्ति अर्थात् भदौ १ गते, सुदूरपश्चिममा मौलिक पर्व ‘ओल्के’ मनाइँदै छ । आफ्ना छर-छिमेक तथा इस्टमित्रहरुबीच ‘ओल्को’ 'विशेष प्रकारको उपहार' साटासाट गरेर यो पर्व मनाइन्छ । सुदूरपश्चिमसँगै कर्णाली प्रदेशमा पनि यो पर्व मनाइन्छ । ओल्के पर्वका दिन पिँडालुको गाभा 'कलिलो पात', दूध, दहि तथा मिठा परिकारहरु उपहारका रुपमा बाँड्ने चलन छ । साथै, छोरी चेलीहरु ‘ओल्को’ लिएर..
रसुुवा, १ भदौ । जनैपूर्णिमा पर्वअन्तर्गत गोसाइँकुण्डमा लागेको धार्मिक मेला भर्न आएका भक्तजनबाट चढाएको भेटी सार्वजनिक भएको छ । गोसाइँकुण्ड क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष सञ्जीव डिएमका अनुुसार भक्तजनले गोसाइँकुण्डको मन्दिरमा चढाएको भेटी रु एक लाख ३४ हजार ३६५ सङ्कलन भएको छ । मन्दिरमा सङ्कलन भएको भेटी रकम जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवामा ल्याई सर्वपक्षीयरूपमा गणना गरिएको हो । प्राप्त रकम महादेवको नाममा खोेलिएको..
गाईजात्राको रौनक, व्यङ्ग्य प्रदर्शन [फोटो सहित]
मध्यपुरथिमि, ३१ साउन । “घिनित्वाङ, घिनित्वाङ घिन्ताङ घिसी त्वाङ, ताहामचा गना ते ग्वाङखङ् प्वाले ते, ग्वाङ प्वाले मन्ह्यसा खुसिङ चुइक छोय”, आजदेखि भक्तपुरमा शुरु भएको सातदिने गाईजात्रा पर्वमा टोलटोलमा यही गीत गाएर घिन्ताङघिसी नाच नाच्दा गाईजात्रामा रौनक थपिएको छ । धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व बोकेको गाईजात्राको प्रमुख आकर्षण एवं भक्तपुरमा मात्र नाचिने घिन्ताङघिसी नाच प्रदर्शनले गाईजात्राको रौनक थपिएको हो । घिन्ताङघिसी नाच..
गाईजात्रा पर्व मनाइँदै, उपत्यकामा आज सार्वजनिक बिदा
काठमाडौँ, ३१ साउन । काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबारबाट धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको गाईजात्रा पर्व मनाइँदै छ । भाद्रकृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमी तिथिसम्म मनाइने गाईजात्रा उपत्यकाका नेवारी समुदायले धुमधामसँग मनाउने गर्दछन् । वर्ष दिनभित्र दिवंगत भएका आफन्तको स्मृतिमा गाई वा गाईको प्रतीकका रूपमा विभिन्न झाँकी प्रदर्शन गरेर उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा गाईजात्रा मनाउने चलन छ । सरकारले शुक्रबार उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । जात्रा अवधिमा..
बौद्ध धर्मको शिक्षा दिँदै जापानमा रोबोट (भिडियाे)
काठमाडौं, ३० साउन । जापानको एक जेन मन्दिरमा रोबोट पुजारीले बौद्धधर्मको शिक्षा दिने गरेको छ । बौद्धशिक्षामा मानिसको चासो बढाउनका लागि यो कदम चालिएको हो । रोबोटले बौद्धधर्मको मुहार परिवर्तन गर्ने आशा मन्दिरले लिएको छ । तर आलोचकहरूले यो रोबोट फ्रांकेस्टाइनको राक्षस जस्तो भएको बताएका छन्। एन्ड्रोइड रोबोटले क्योटोमा रहेको ४०० वर्ष पुरानो कोदाइ–जी जेन मन्दिरमा उपदेश दिन थालेको हो । पवित्र रोबोटले हार्ट..
जनैपूर्णिमा विशेष : विधिपूर्वक जनै र रक्षासूत्र धारण
काठमाडौँ, साउन ३० । प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन, जनैपूर्णिमा (ऋषि तर्पणी) पर्व आज देशभर नवयज्ञोपवीत एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदै छ । पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षासूत्र बाँध्छन् । गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रिएको यज्ञोपवीत एवं डोरो (रक्षासूत्र) धारण गरेमा नकारात्मक तत्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ..
काठमाडौँ, २९ साउन संस्कृत भाषामा रचना भएका ग्रन्थमा रहेका ज्ञान प्रसारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले दोस्रो विश्व संस्कृत दिवस बिहीबार विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । गत वर्षदेखि जरो किलो प्रतिष्ठान नेपालले प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाउन थालेको हो । संस्कृत भाषाको संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि विश्व संस्कृत दिवस मनाउन लागिएको कार्यक्रम संयोजक डा गोविन्दशरण उपाध्यायले राससलाई जानकारी..
काठमाडौँ,२९ साउन भोलि बिहीवार जनै पूर्णिमाका दिन व्रतबन्ध गरेका द्विजातिहरूले जनै फेर्ने गर्छन् । सनातन हिन्दू धर्मका १६ संस्कारमा उपनयन संस्कार अन्तर्गत जनै लगाउने गरिन्छ । यसलाई यज्ञोपवीत संस्कार भनिन्छ । जनै लगाउने पवित्र मन्त्र यसप्रकार छ : ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेयर्त्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥ जनैलाई उपवीत, यज्ञसूत्र, ब्रह्मसूत्र लगायतका नामले पनि चिनिन्छ । जनै धारण गर्ने परम्परा..
पार्टी प्यालेसहरूमा दर खाने कार्यक्रम गर्न रोक
काठमाडौँ, २९ साउन । चेलीलाई बोलाएर माइतीले दर खुवाउने तीजको पर्व अब पहिलेजस्तो छैन । दर खाने दिन आउनु महिनाअघिदेखि नै पार्टी प्यालेसमा समूह–समूहमा भेला भएर भड्किलो तरिकाले खानपान र नाचगान चल्छ । संघसंस्था र समूहहरूले खर्चिलो पाराको कार्यक्रम गर्छन् । यसपटक भने त्यस्ता कार्यक्रम आयोजकले सचेत हुनुपर्ने भएको छ । तीज नजिकिँदै जाँदा केही जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले पार्टी प्यालेसहरूमा दर खाने..
नवलपरासी, २८ साउन । धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण स्थल मानिने पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणीधाम आजभोलि सबैको रोजाइ बन्दै गएको छ । उक्त धामलाई गजेन्द्र मोक्ष धाम पनि भन्ने गरिन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्र्तगत पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट बजारबाट २५ किलोमिटर पूर्वदक्षिण तथा पूर्वी नवलपरासीको दुम्किवासबाट करीब १५ किलोमिटर दक्षिणतर्फ अवस्थित यस धाम पछिल्लो पटक आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको रोजाइ बन्न थालेको..
तीजको लहर आयो बरीलै, प्रशासनले जारी गर्यो सूचना
काठमाडौँ, २७ साउन । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीजलाई मौलिक, सभ्य, सुसंस्कृत, मर्यादित र शान्तिपूर्ण तरिकाले मनाउन आग्रह गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले स्थानीय तह र स्थानीय प्रहरीको समन्वयमा तीजलाई मौलिक संस्कृतिका रुपमा मनाउन अनुरोध गरिएको जानकारी गराउनुभयो । काठमाडौँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पछिल्लो पटक तीज मनाउने क्रममा मौलिक संस्कृति मेटिँदै गएको भन्दै प्रशासनमा आएपछि भड्किलो नभई शान्तिपूर्ण तरिकाले..
काठमाडौँ, २७ साउन मुस्लिम धर्मावलम्बीको महान् पर्व बकर इद देशभरका मस्जिदमा भोली मनाइँदैछ । इदुल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको ७०औँ दिनमा बकर इद मनाउने धार्मिक विधि छ । यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु बिहानै स्नान गरी नजीकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन् । नमाज पढिसकेपछि एकापसमा अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदानप्रदान गरिन्छ । यस अवसरमा दरबारमार्गस्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मिरी मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद..
दार्चुला, २६ साउन देशकै सबैभन्दा लामो समयसम्म मनाइने सुर्माभवानीको जात्रा शुरु भएको छ । साउन महीनाको मान्य औँसीदेखि शुरु भएर दश दिनसम्म सो जात्रा विधिवत् रुपमा मनाइने गरिन्छ । दार्चुला र बझाङको सीमा क्षेत्रमा सो जात्रा लाग्ने गर्दछ । सुर्माभवानी जात्रा औँसीदेखि १७ दिन र रतेडीदेखि सात दिनसम्म धुमधामका साथ मनाइने गरिन्छ । अपी हिमाल गाउँपालिकाको घाजिर छेती हुँदै बझाङको सुर्मासरोवरको सीमासम्म..
Results 612: You are at page6of 21